Daawo :-Baarlamaanka Itoobiya Oo Shaaciyay Samiga Kilirka Soomaalida Ku Yeelanayo Shidaalka Laga Helay Deegaankaasi, |
Daawo :-Baarlamaanka Itoobiya Oo Shaaciyay Samiga Kilirka Soomaalida Ku Yeelanayo Shidaalka Laga Helay Deegaankaasi,
Adis Ababa(GNN)Aqalka sare ee Baarlamaanka Itoobiya ayaa meel mariyay xeer qabyo ah, kaasoo qeexaya inta uu la’eg yahay saamiga uu dowlad deegaanka yeelanayo, kaddib markii shidaal laga helay deegaanka Hala-quraan.
Sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha sharciga oo ay soo diyaarisay Wasaarada Batroolka Itoobiya oo uu meel mariyay Baralamaanka dalkaasi ayaa muujinaya in dowlad deegaanka Soomaalida uu yeelanayo 50% dakhliga ka soo xarooda shidaalka dhulkiisa laga soo saaro, inta soo hartay 25% waxaa iskaleh dowladda federalka Itoobiya, halka 25% loo qeybinayo gobollada kale ee Itoobiya.
Gaaska laga helay Ismaamulka Soomaalida oo gaaraya 1.6 Trillion Cubic Feet, ayaa waxaa ogaatay African Global Energy Ltd oo ah shirkad ka shaqeysa dhinaca tamarta oo laga leeyahay dalka Ingiriiska.
Qorshahan waxaa ka soo shaqeeyay Golaha Federaalka Itoobiya, waxaana gobolka Soomaalida ku metala Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka, Aadan Faarax, ku xigeenkiisa, Cabdi Maxamed, afhayeenka baarlamaanka, Mubashar Dubad Raage, wasiirka Maaliyadda, Rashiid Xaaji, gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare Itoobiya iyo Eng Maxamed Shaale, madaxa xarunta dhexe ee xisbiga deegaanka ka arrimiya.
Arrintan ayaa meesha ka saareysa hadal heyn muddooyinkan warbaahinta ay qoreysay, taasoo la xiriirtay in 5% uu dowlad deegaanka Soomaalida ku yeelanyo shidaalka laga helay dhulkiisa, iyadoo warkaasna la sheegayay in laga soo xigtay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiye Axmed.